Ninkaan waxa uu ka taajiray qaxootiga Sweden | Somaliska
Ninka lagu magacaabo Bert Karlsson waxa uu leeyahay 4 kaam oo lagu haayo qaxootiga ku cusub Sweden. Ilaa iyo sanadihii 1990 ayuu ku jiray ganacsiga soo galootiga balse hada ayuu soo bandhigay qorshe uu doonayo in uu malaayiin karoon uga faa’idayo qaxootiga cusub ee imaanaya Sweden.
Bert ayaa doonaya in uu furo 20 kaam oo cusub isagoo sheegay in kaamamkiisa ay ka shaqeyn doonaan soo galootiga keliya. Waxa uu wargeyska Aftonbladet u sheegay in uu doonayo in uu dhiso kaamam casri ah oo ay yaalaan kombutaro, jiimam iyo xitaa leh basas lagu qaado qaxootiga marka ay meel aadayaan.
Bert ayaa sheegay in kaamamkiisa uu ka dhisayo bartahama iyo koonfurta Sweden, isagoo sheegay in uusan hal xabo ka dhisi doonin waqooyiga halkaasoo uu ku tilmaamay meel aysan cidna dooneyn in ay ku noolaato. Mar la waydiiyay sababta uu doonayo in uu shaqaalaysiiyo soo galootiga kale ayuu sheegay in ay tahay in Swedishku ay yihiin kuwo caajis badan, isagoo ku kaftamay in ay hada dhalinyarada Swedishka Norway shaqo u doonayaan maadaama Norwegianku naga caajis badanyihiin.
Qorshaha Bert ayaa ah in uu dhisayo kaamamka ka dibna uu ka kireeyo laanta Socdaalka (Migrationsverekt). Ma ahan keliya Bert dadka dhaqaalaha badan ka sameeyay soo galootiga Sweden oo laftooda ah suuq weyn oo aay ka faa’idaan shirkado iyo shaqsiyaad fara badan.
Masiibdaha dadka qaar aya dad kale uu faa’ida ah.
waa maamaha Carabia.
Waaw waa sheeko yaab leh in nin swedish ah uu rabo inuu shaqaaleeyo dadka aan swishka ahayn , waana talaabo dhinaca hormarka loo qaadayo waanan soo dhaweynaynaa hadaan nahay dadka sweden ku shaqada la,
Ta kale xagga isdhexgalka xataa waxbay ka tari lahayd hadii ay 20 swidhish ah sidaas dadka soo galowga ah wax ugu qabanayaan waana fursad …
Wow daad fara badan aya ka fa’ideysadin hee manshaa allah